Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo aqbalay in la cafiyo 15-kii Xildhibaan ee la ganaaxay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo aqbalay in la cafiyo 15-kii Xildhibaan ee la ganaaxay
Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo aqbalay in la cafiyo 15-kii Xildhibaan ee la ganaaxay
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu aqbalay in cafis loo fidiyo 15-kii Xildhibaan ee laga ganaaxay shan kulan, oo ka mid ah kulamada Golaha Shacabka.
Xildhibaanadan ayaa Sabtidii lagu eedeeyay in is hortaag ku sameeyeen kulan uu xilligaa Golaha Shacabka ku lahaa Xaruntooda Magaalada Muqdisho, xilli Xildhibaanadu ka biyo diidaneyd qorshe socday oo sida ay sheegeen muddo kordhin loogu sameynayo Baarlamaanka iyo Madaxtooyada.
Xildhibaanadan ayaa maanta laga hor istaagay inay ka qaybgalaan kulan ay Xildhibaanada Golaha Shacabka ku yeesheen Xarunta Villa Hargeisa, ka dib markii ciidan fara-badan lagu soo daadiyay barraha kontoroolada ee laga ilaaliyo Aqalka Madaxtooyada iyo isgoysyada qaar ee Magaalada Muqdisho.
Xubno uu horkacayay Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Somaliya, Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) oo la kulmay Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa ugu baaqay in Guddoonka uu cafis u fidiyo Xildhibaanadasi, taasoona uu Gudoomiye Mursal aqbalay.
Xildhibaanadan ayaa la filayaa inay ka qaybgalaan kulanka maalinta Sabtida ay Golaha Shacabka ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, haddii aanu qorshuhu waxba iska bedelin.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo aqbalay in la cafiyo 15-kii Xildhibaan ee la ganaaxay was last modified: April 1st, 2021 by Admin
Dowladda oo sheegtay in geba-gabo marayo keenista wejiga 2aad tallaalka COVID-19
Duqeymo ka dhacay deegaano ka tirsan Shabeelaha Hoose, Baay & Jubbada Hoose
Khilaafka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya oo sii xoogeystay.